Veloma amin'ny Gnome Fallback (Mode Maody) ao amin'ny Gnome 3.8 | Avy amin'ny Linux
Veloma amin'i Gnome Fallback (Mode Maody) ao amin'ny Gnome 3.8
Fantatry ny mpampiasa maro, ao amin'ny kinova voalohan'ny Akorandriaka gnome, ireo mpampiasa izay tsy nanana solosaina haingam-pandeha PC dia tsy afaka nampandeha azy tsara, na koa tamin'ny milina virtoaly.
Ho an'ity dia nampiharina izy io Fiverenana Gnome, izay nanome anay traikefa nitovy tamin'izany Gnome 2, fa toa ny mpamorona ny GNOME manelingelina azy ireo io safidy io. Mila mampiasa ianao Akorandriaka gnome eny na eny, tsara Fiverenana Gnome miala amin'ny fahitana an'ny Gnome 3.
Misaotra an'i llvmpipe, afaka mandeha ny solosaina tsy misy fanafainganana sary Gnome-Shell, ary izany no mahatonga ilay maody Fallback na Gnome mahazatra araka ny fantatry ny sasany fa hanjavona ao Gnome 3.8. Miantehitra amin'ity teknolojia ity izy ireo na dia fantany aza fa tsy mandeha izany (na tsy mahavita tsara) amin'ny maritrano toa ppc, s390, sandry ary amin'ny rafitra hafa tsy Linux (mametraka OpenBSD ohatra).
Avelany hahita ao ianao Ity rohy ity, izay anehoan'izy ireo fa "antony hafa" ny hoe Fomba fihemorana Tsy mbola nisy fiovana mifandraika amin'ny fivoarana sy fisehoana lesoka niseho hatramin'ny niandohany, toy ny fampandrenesana. Ary tsy misy mampiasa na mizaha toetra azy ary ny fampiharana toa azy Cheese o fiaraha-miory tsy hiasa tsara izy ireo raha tsy misy GL.
Fa raha tsy raharahan'izy ireo manokana izany, iza no hanao izany? Ho an'ireo mpampiasa hahatsapa ho mahazo aina amin'ny fampiasana ny maody mahazatra, ny tovolahy avy GNOME dia hamela andiana fanitarana ho Akorandriaka gnome mba hampita zavatra mitovy amin'izany.
Rehefa manafoana izy ireo Fiverenana Gnome, Module vitsivitsy no ho voakasik'izany:
Satria fantatr'izy ireo fa mety ho zavatra kely daholo izany rehetra izany dia izy ireo mihitsy no manoro hevitra ny hampiasa ny sehatr'asa Desktop hafa ho solony, ohatra Xfce o VADIKO..
Famaranana, tsy manam-potoana na faniriana hanokana ny ezak'izy ireo hihatsara izy ireo Fiverenana Gnome Fanapahan-kevitra tsara? Ho hita ara-potoana izany.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny Linux » Fisehoana / personalization » Veloma amin'i Gnome Fallback (Mode Maody) ao amin'ny Gnome 3.8
Fanapahan-kevitra tsara. raha te hanatsara ny akorandriaka ianao dia tokony apetrakao ny kilasika
Heveriko fa ... ny gnome 2 dia tena tsara tokoa satria ny fomba rehetra azon'izy ireo avy amin'ny kinova 3 dia fahadisoana bebe kokoa noho ny teboka fihaonana, fandrosoana somary lehibe sy mandroso tokony hananan'ny tontolo desktop
Tsy fantatro ny momba anao fa tato ho ato dia mahatsiaro ho very very eo amin'ny tontolon'ny tontolon'ny birao ao Gnu / linux aho:
Mijery an'i Ubuntu sy ny Unity ianao ary mieritreritra fa tsy afaka manao na inona na inona amin'izany ianao ary ny fanaingoana rehetra (sy kely) dia mandeha amin'ny antoko fahatelo. Ary koa fa ny endriny dia mety tsy ho mahafinaritra ny sasany.
Avy eo ianao mieritreritra ny KDE ampiasainao ary hoy ianao wow! Azoko atao ny manao azy ny zava-drehetra, azo ovaina be izy io nefa miara-miasa amin'ny tranomboky arivo sy iray izay miaraka amin'ny gtk hampandeha ireo rindranasa natao ho an'ny gnome. Hoy ianao: mametraka elatra aho! Mifamadika amin'ny chakra aho, mandeha haingana sy milamina ny zava-drehetra (zavatra "tsy fahita firy" amin'ny kde ... [tsy foana, tsy ady lelafo azafady]) saingy malahelo ny fampiharana sasany nosoratana ho an'ny gnome ianao fa mila "mikorontana" hametrahana azy ireo satria tsy anaty bundles izy ireo, dia tsy ao anaty CCR ary tapitra amin'ny AUR ianao ary tapaka ny fiankinan-doha satria tsy mifanaraka ny anaran'ny fonosana (na dia misy aza izany, fifandraisana aur-ccr). Ary amin'ny farany dia esorin'izy ireo ny tohana 32-bitika ary mandositra miaraka amin'ny rambonao eo anelanelan'ny tongotrao ianao.
Taty aoriana manandrana lxde ianao ary miteny fa tsotra tsotra izao, mandany kely nefa tsy dia tsara tarehy.
Manandrana xfce ianao ary miteny, ummm mahaliana, ny zavatra tsara momba ny gnome, mahafinaritra fa mampiadana ny gtk2 ary misy ny fampiharana tsy mety ary tsy maivana velively, tsy mavesatra fotsiny.
Avy amin'ny gnome-shell milaza fa tiako ny zavatra sasany, toy ny rehefa mangataka aminao ny tenimiafinao, mamaly hafatra avy amin'ny fampandrenesana, ny fomba mavitrika amin'ny fitantanana birao virtoaly, nefa koa mampita izany fahatsapana hoe "misintona" sy fanitarana izany, na patch marobe izy io miaraka amin'ireo fanavaozana tsy misy tohana intsony.
Tena manantena phanteon aho, avy amin'ny OS ambaratonga voalohany, toy ny rano Mey satria tsy mahazo aina amin'ny iray amin'ireo safidy hafa ankehitriny aho, izay tsy midika hoe tsy tsara izy ireo ary na dia kely aza ny tsy fananan'izy ireo asa betsaka - maimaim-poana ao ambadik'izy ireo, ara-drariny sy tsotra ny hevitro ampahany (sy manokana) momba ny toe-javatra iainan'ny tontolon'ny birao ankafizinay indrindra -gnu / linux-.
Mandritra izany fotoana izany aho dia hiandry amin'ny wXP efa lany andro
PS: Tsy nieritreritra linuxmint aho satria mbola tsy nampiasa azy io ary toa fivoaran'ny gnome-shell marina izany fa tsy misy hafa.
Manaiky tanteraka ny hevitrao aho. Nanandrana ny fananganana isan'andro an'ny ElementaryOS aho ary mahavariana fotsiny, mihombo aza ny ranony noho ny XFCE ary toa tsara tarehy kokoa izy. Ny hany zavatra tsy tiako dia ny tsy fahampian'ny fanaingoana izay amboaran'ny ekipa fanabeazana fototra azy, ary koa ny tsiambaratelo momba ny daty sy ny tsingerin'ny asa. Na dia misy aza izany olana rehetra izany dia heveriko fa ho iray amin'ireo tontolo iainana ny fanaovana izany.
Marina fa tena maivana sy tsara tarehy izy, tiako izany. Tsara ihany koa ireo rindranasa ary marin-toerana fa tsy mbola ao anaty beta. Mino aho fa rehefa mivoaka dia hahita fahombiazana.
Raha ny momba ny fanamboarana azy dia tsy ny zava-drehetra dia tokony hohajaina, zavatra tsy tian'ny mpampiasa Linux izany. Ny tetik'asa Elementary dia manana tanjona ao an-tsaina ary ny famolavolana dia tena zava-dehibe amin'izy ireo. Heveriko ihany koa fa misy lohahevitra samihafa ho an'ny plank (na dia tsy miasa amin'ny kinova ankehitriny aza)
SoftLibre dia hoy izy:
Angamba amin'izao fotoana izao ny distros Linux lehibe (commercial + debian), dia tokony hametraka tontolo sary tsotra sy kely mitovy amin'ny (na iray amin'ireo) Xfce, Lxde na Razor-qt, ho "denominator iraisana ambany indrindra amin'ny sary" (izay mbola bonico )
-Na dia manana faritra misy anao hafa aza ny distro (RH-Fedora GnomeShell, OpenSuse KDE SC, Ubuntu Unity, sns)
-Mba misy farafahakeliny fikojakojana, fonosana, habaka ao amin'ny iso, fampidirana sary, ...
-Manolotra ny rafitra takiana ambany (tsy misy faran'izay mahery) sy ny mifanentana amin'ny fampitaovana malalaka.
-Mba hanamorana ny famoronana boky torolàlana sy ny famoronana sora-tsary ho an'ny indostria (fametrahana sy fametrahana, ohatra; ary koa boky fampianarana sy fampianarana ho an'ireo mpampiasa tsy mandroso ...)
Safidy toy izao eo am-pidirana amin'ny fidirana amin'ny fidirana dia hampihena ny "fahatsapana" fahatapahana ao amin'ny Linux, ary heveriko aza fa ny tontolo iainana sary dia tsy tokony hovesaran'ny zavatra toa ny gnome-fallback ary hanao loharanom-bola mahomby handrosoana sy hanavao.
Valiny amin'i SoftLibre
Riven taker dia hoy izy:
Gnome 2 ianao dia tsara raha naharitra ianao, Xfce mandritra ny fotoana maharitra "raha mifoha izy ireo" dia hiafara amin'ny famerenana azy io, tsy ho an'ny Mate aho (fork tsara fa tsy maharesy lahatra ahy) na Kanelina ...
Tiako foana ny Gnome, saingy rehefa nanao ilay fitsambikinana tamin'ny andiany 3 aho dia nanomboka nitady fomba hafa, KDE4, mazava ho azy, saingy satria tsy manana loharanom-pahalalana hananganana azy ny solosainako, dia eo amin'ny Openbox aho izao, tsy dia mahazo aina loatra fa manome ahy ny vokatra ilaiko isan'andro, eny, azoko tsara fa nilaza izy ireo hoe "mila manavao na maty ianao" fa ny fahatsapako tsara tao amin'ny Gnome 2, nostalgic aho 😀
Mamaly an'i Riven Taker
Ny Gnome 2 dia toy ny, soooo mahazatra, afaka manao zavatra miaraka aminy ianao, nibolisatra ambony ambany ianao ary tsy naninona izany, nahatsapa aina foana, fa araka ny filazanao fa tsy afaka mijanona ao akory ianao (lany andro) ary ny vady dia tsy safidy azo atao.
Marina, nahita safidy toa an'i Centos aho izay amin'ny teôlôjia dia mitondra fanampiana hatramin'ny taona 2020 heveriko fa saingy tsy dia lany andro loatra aho noho ny birao efa maty, toy ny fiezahana hijanona ao XP (tsy misy afo azafady) satria tsara kokoa noho ny mandresy 7 (araka ny novakiako) raha ajanona ny fanohanana, na inona na inona "maty" indrisy.
Tsy hoe aleo izany fa efa nahazatra azy.
ny tadidiko voalohany momba ny linux dia ny gnome2, gaga aho tamin'ny takelaka 2 ... .. hahahaha, rehefa nanomboka ny gnome3 dia tsy tiako mihitsy, na dia efa xfce aza aho no nampiasa izany, izay lazainao, raha mifoha izy ireo, afaka miafara amin'ny safidy ara-toekarena tsara indrindra amin'ny linux, tsy mandresy lahatra ahy koa ny vady, na ny kanelina, ny kde4 dia toy ny tantaram-pitiavana nandrara xD, tsy manana fitaovana finday voalohany ~ _ ~, amin'izao fotoana izao , eo amin'ny birao birao misy ahy xfce ary amin'ny solosaina findainy ampiasaiko openbox (vao haingana novaiko ho mahatalanjona) ny firaisan-kina, azoko lazaina fa tena tsara tarehy sy kanto izy io, hitako fa misy fampiasa io, saingy tsy hitako ny tenako mampiasa firaisan-kina isan'andro. Ka… .. xfce ary mahatalanjona ho ahy ^^
mmmm nandrara ny tantaram-pitiavana ho an'ny roa avy eo xD, nijery Awesome aho, ho an'ny netbook (mifanohitra lavitra noho ianao aho, ny birao Openbox miaraka amin'i Debian, Xfce netbook miaraka amin'i Arch), saingy toa hitako fa manana fiolahana fianarana be dia be, tsy haiko, mieritreritra aho fa ho fotoana kely izao mandra-pahatapitro ny fampiasako ny iray amin'izy ireo, niresaka tsara momba an'i Xmonad sy ratpoison izy ireo,… efa lohahevitra forum io 😀
maty niaraka tamin'ny gnome 2 i gnome
gnome 3 dia tokony hatao hoe zavatra hafa, tsy izany no gnome
Miombon-kevitra aminao aho 😉
Gnome 3 Shell dia tokony hatao hoe "TheDeskBefore KnownAsGnome"
Izaho dia eo amin'ny fanontana mint 13 mate, tsy maintsy nandao an'i ubuntu aho satria niady tamina firaisan-kina na niaraka tamin'ny gnome (manana ATI) ny carte graphique ankehitriny, fa milamina tsara ny zava-drehetra ary tsy misy hatsiaka amin'ny écran, izaho dia manantena ny hiverina amin'ny ubuntu fa tsy amin'ny vidiny rehetra, rehefa manatsara ny birao (samy firaisankina ary
gnome3) Hiverina aho
Manana Nvidia vitsivitsy aho fa tsy afaka mitaky fanafainganana mandritra ny fotoana fohy. Ka mikasa ny hifindra any Cinnamon aho rehefa manana session 2D voadinika bebe kokoa izy. Mandritra izany fotoana izany dia hampiasa ny Gnome Fallback amin'ny Debian Wheezy aho rehefa mifamadika amin'izany satria mampiasa Gnome 3.4 (miaraka amin'i Nautilus mbola tsy voafongotra) ka afaka miandry am-pitoniana aho raha mbola mila vonona kokoa ny zavatra.
Efa bebe kokoa hatramin'ny nivoahan'ny gnome3, lazaiko fa mitsoka izy, ary ny mampalahelo dia isaky ny manafina azy io bebe kokoa izy ireo = (
Tena tsy tiako tokoa ny GNOME Shell. Nametraka azy aho hizaha toetra azy amin'ny Ubuntu ary tiako kokoa ny fallback, ka navelako ny fallback ary nesoriko ny akorany. Raha tsy hisy intsony izany, miala tsiny aho fa hifikitra amin'ny Unity. Farafaharatsiny ao amin'ny Unity azonao atao ny manafina ny bara eo anilany, mampiasa HUD amin'ny bokotra "alt" fotsiny, esory ny browser fotsiny rehefa mila izany ianao ary, raha ny fahitako azy, haingana kokoa noho ny GNOME Shell (farafaharatsiny farafaharatsiny kinova). Ny tokana ivelan'ny GNOME Fallback sy ny firaisana dia manintona ny masoko dia MATE. Tsy tiako koa ny KDE (miadana loatra ary ny bokotra kely eo amin'ny birao toa tsy afaka manampy ny jellyfish gelatinous); lxde sy xcfe tena haingana sy tsotra fa tsy ao anatin'ny tsapako izany. Tsy haiko, ny karazana GNOME olona namono tena.
Tsy fantatro hoe maninona izy ireo no mitsikera matetika ny vatan'ny gnome sy ny firaisan-kina, tsy maintsy mivoatra isika, tsy afaka mijanona miaraka amin'ny menio mahazatra mahazatra isika, na dia mahazo aina sy maivana ary mifanaraka amin'ny filan'ny mpampiasa aza izy io nefa tsy manana izany hatsarana izany. izay tadiavin'ny mpampiasa sasany. Raha izaho manokana dia tena tiako ny gnome-shell, (minimalist, fanavaozana) ho ahy fa zava-baovao izy io, zavatra tsy mbola niainako hatrizay, heveriko fa izany no mahatonga ahy ato amin'ny Linux, satria mety hanova zavatra izy ireo ary tsy hijanona amin'izay mitovy amin'i foana
Ny tiana hotazomina dia ny hitazonana ny sarin'ny desktop. Mazava ho azy fa tsy maintsy mivoatra ny tontolo iainana ary hisy hatrany ny fahombiazana sy ny lesoka, fa ny iray amin'ireo tian'ny GNU / Linux dia afaka manana safidy. Ary eo ny marina, Mate izay fitehirizana ny Gnome 2, Cinnamon dia mitady izay ananan'i Gnome 2 miaraka amin'ny tombony azo avy amin'ny Gnome 3, Unity tena manintona izay mbola mino aho fa mihatsara, Gnome Shell ho an'ireo izay tia anao, KDE izay tena be mpampiasa. Fantatro fa nanaparitaka mihoatra ny ilaina izy ireo saingy misy zavatra tsara mivoaka amin'ny farany.
Mpanohana ilay malaza aho hoe "Miasa io, AZA MIKASIKA AZY!" Tsy ho azoko mihitsy ilay foto-kevitry ny "EVOLVING BY THE FUCK" izay ananan'ny sasany.
fohy ny fanao.
Tsapako fa ny zavatra nataon'i Ubuntu tamin'ny Unity dia tsara ihany, ny fampifangaroana ny akorandriaka Gnome miaraka amin'ny bara gnome 2 dia tsara ho ahy (indrindra ny antsipiriany toy ny mpampahalala), saingy nataon'izy ireo mavesatra sy tsy azo tononina noho izy izy io. Gnome shell… ..and avy eo ilay bara ilany tsy azo esorina dia ny mololo farany. Avy eo dia tonga ny Elementary ary nihatsara ny Unity, saingy manizingizina ny ho distro miorina amin'ny Ubuntu fotsiny izy ireo fa tsy handefa toy ny birao maimaim-poana ampiasaina amin'ny distro rehetra. (Hivoaka ny kinova Ubuntu 13.04 ary mbola tsy mamoaka ny kinova miorina amin'ny 12.04 xD) izy ireo
Raha miverina amin'ilay lohahevitra aho, ny zavatra tokiko tsapako fa tsy hita i Gnome amin'izao fotoana izao dia raha tsy hitantana ny sehatry ny asa tahaka ny taloha izy, dia mandany fotoana bebe kokoa amin'ny fampiroboroboana ny fanitarana.
Miombon-kevitra tanteraka aminao aho. Avy amin'ny KDE aho, ary rehefa avy nanandrana ny Gnome Shell dia aleoko ny Gnome, dia nanintona ahy ny fahatsorany.
Mila manavao isika, tsy afaka mandany ny fiainantsika manontolo amin'ny latabatra mahazatra. Tsy azoko hoe ahoana no ahitan'ny sasany fa sarotra ny mampifanaraka sy manaiky fanovana.
Inona no tsy azo ovaina? Marina izany fa tsy manana zavatra poloney izy io, fa amin'izao fotoana izao dia afaka manao zavatra betsaka amin'ny Gnome ianao. Tsy fantatro ny haavon'ny fanaingoana tianao holazaina, fa ny Gnome Shell dia azo ovaina kely mba hahatonga azy ho anao.
sharysce dia hoy izy:
Tsy fantatro ny momba anao saingy tsapako fa manomboka mahita lamina iray eto aho, tsy milaza aho hoe tsy mety izany, fa amin'ny tiako dia tsy tiako ny fandehan'ny raharaha, taiza ireo fotoana izay nahafahako nanao zava-mahatalanjona tamin'ny Pentium4-ko 3.8 GHz sy ny 2 GB-ko RAM?, Fahagagana ny fametrahana fotoana tokony hametrahana 6.0, na i Ubutu 10 no faran'ny izao tontolo izao, tsy mila miahiahy momba ny fivezivezena ny maritrano ho an'ny fiasan'ny akorandriaka sy OS toy izany, mazava ho azy fa vao miresaka 2 taona lasa izay aho, izao dia hita fa raha mila mampiasa Shell azo ampiharina sy mahomby kokoa aho na ny taranaka ho avy iray izay efa ananako dia mila manana solosaina misy haingam-pandeha sary, manontany tena aho hoe mampiasa Windows aho? hoy aho satria rehefa miorina eo ho eo ny mpampiasa WinXP. 7 taona nifindra monina tany Vista ary niharan'ny fahadisoam-panantenana lehibe toa izany izy ireo. Na izany aza, zavatra nitranga tamin'i Win7 tamin'ny taona 2009, izay ahafahanao mamindra tanteraka ny maritrano mba hiasa, izany hoe mividy solosaina vaovao satria ilay iray izay tsy omena anao intsony ny sakany, manizingizina aho fa tsy miteny aho Tsy mety ny manavao ny fitaovan'ny solosainao amin'ny fandrosoan'ny teknolojia tsy tapaka, saingy izany no vazivazy amin'ny fampiasana Deian, Mint, Ubuntu, Fedora, sns. Miaraka amin'ny Gnome, KDE, XFE, Mate, Cinnamon, sns., Tontolo iainana sary sy rafitra miasa izay manohana na tohanana ny maritrano mendrika.
Manantitrantitra aho fa tsy milaza izany diso izany.
Mamaly an'i sharysce
Uranium23 dia hoy izy:
Pentium 4? Andao, amin'izao fotoana izao, tsy dia lafo loatra ny manamboatra solosaina amin'ny alàlan'ny fividianana ny processeur Atom izay efa misy ny hafainganam-pandehan'ny sary mihoatra ny ampy hampandehanana GShell na KDE, MATE, CInnamon, sns.
Manana P4 misy RAM 4GB aho (ny be indrindra zakany) ary tsy manana olana amin'ny fitantanana ny Mint amin'ny XFCE aho amin'ny zavatra rehetra ...
Valiny ho an'i Uranio23
Lehilahy !!! 10 taona lasa izay dia nilaza zavatra mitovy na mihoatra ny mitovy izy ireo, saingy tsy miresaka momba ny pentium 4 izay efa teny an-tsena nandritra ny roa taona izy ireo fa momba ny pentium (ilay 1).
Ny hoe ny lozisialy ankehitriny dia manohy miasa miaraka amin'ny fitaovana hatramin'ny 10 taona lasa izay dia zava-bita tsara, aza maniry hijanona amin'ny zavatra toy izany ny zava-drehetra.
Entanina i XFCE hifindra amin'ny GTK3 mba ho lasa birao farany an'ny GTK.
Salama aho fa mampiasa ubuntu 12.04 aho izao ary mila mampiasa falln gnome gnome satria
1- Mahatsiaro ho mahazo aina kokoa aho satria tsy variana amin'ny zavatra hafahafa maro izay misy vokany
2- arakaraka ny fiantraikan'ny tontolon'ny birao, ny loharano ilainy
mampalahelo fa ity desktop alternatives environment ity dia tsy novolavolaina lavitra
Misy zavatra tena miharihary amin'izany rehetra izany, ary amin'ny lafiny iray dia manandrana amin'ny fomba iray na amin'ny fomba hafa ireo birao lehibe, hanakaiky kokoa ireo fitaovana finday.
Ny olana dia amin'ny fomba anaovan'izy ireo izany. Ny Unity sy ny Gnome Shell, ohatra, dia mankany amin'io tanjona io ary mitovy ihany ny KDE, saingy amin'ny fomba marani-tsaina kokoa no eritreretiko. Fa maninona? Satria ny roa voalohany voalaza etsy ambony dia tsy manana variant ho an'ny mpampiasa tsirairay.
Ny KDE, dia manana ny safidinao Desktop, ny safidin'ny Netbook ary hanamparana azy rehetra, ny safidin'ny Takelaka. Izy ireo dia mitazona ny 3 rehetra amin'ny fotoana iray izay mamela antsika hanana tsiro 3 samihafa miaraka amin'ny hery mitovy.
Raha nanao izany i Gnome dia heveriko fa hahomby kokoa izy ireo anio, satria tsy hahatsapa ho nilaozana ireo mpampiasa Desktop.
Izaho manokana dia mihevitra fa ny fitiavana ny akorandriaka dia tsy fitiavana amin'ny fahitana voalohany satria vao nanomboka nampiasa azy io tamin'ny kinovan'ny Fedora 15 ary tena diky izany, saingy amin'izao fotoana izao dia tsy mandroso firy fa manatsara be amin'ny lafiny sasany fa In fomba iray, Gnome dia toy ny hoe mifaninana amin'ny KDE lehibe, izay amin'ny lafiny rehetra dia ny birao maimaim-poana tsara indrindra misy, ary ankehitriny, eo amin'ny Fedora 17 miaraka amin'ny gnome 3.4 izay tonga aho ary heveriko fa tsara ary tsy Manelingelina ahy izany satria tiako ny manana birao izay tsy mampatsiahy ahy ny lasa amin'ny tafiotra miaraka am-baravarankely, fa ny zavatra nolazaiko dia hoe, malahelo ny gnome 2 koa aho ary mamono azy fa tsy hanolo ny tena andrasana an'ny gnome 2, ka vetivety dia tiako ny shell gnome ary ampiasaiko hatrany amin'ny partition Kubuntu hafa 😀
Gnome 2 dia fako.
Ary i KDE koa.
Ary Windows, amin'ny kinova rehetra.
Ary azontsika atao ny miady hevitra raha ny Gnome 3 na ny Unity dia zara raha misy fako noho ireo teo aloha.
Satria satria nianatra namaky ny birao sy nampiasa ny lesoka izy mba hanararaotantsika dia tsy midika akory izany hoe "niasa" ilay birao. Ho an'izay te hamaky azy ireo, ny antony niheveran'ny mpamorona fa vaky be ny Gnome 2 dia ampahibemaso ampahibemaso (faritra fampandrenesana izay mifangaro hevi-diso tsy misy fotony, fanelingelenana tsy tapaka ary fanelingelenana, fitondran-tena tsy mifanaraka) ary hitako fa tsy azo iadian-kevitra izany; Ny zavatra iray hafa dia hoe nahavita nanao zavatra tsara kokoa izy ireo.
Saingy rehefa matahotra ny famadihana birao ny olon-tsotra satria mijanona tsy mandeha intsony ny tetika rehetra nianarany mafy dia satria tsy dia namboarina hatramin'ny voalohany ny birao.
Mamaly an'i davidm
Marina ny anao amin'ny olan'ny fampandrenesana ... ankehitriny misy zavatra tena mahomby fa ny hafa tsy mahatratra ary izany no fomba fampisehoana ireo rindranasa sy ny fanaingoana tsy misy fotony izay ananan'ny gnome-.shell
Mihevitra ny tenako ho mpampiasa mahazatra aho ary tsy matahotra ny solosaiko. Efa nanandrana azy rehetra aho, miady aho fa ny Gnome2 no tsara indrindra, mampiasa XFCE aho izao.
Eny, tiako ny GNOME Shell, tena hanandrana 3.6 aho tsy ho ela na miaraka amin'ny Fedora 18 🙂
Halako ny Gnome Shell sy ny Unity ary nandao an'i Ubuntu aho noho izany fa raha nanapa-kevitra ny hifikitra amin'ny Unity izy ireo dia toa mahazatra ahy fa tsy tian'izy ireo ny Gnome Fallback.
Ary manohy ny fisehoan'ny Gnome Classic aho ary ato amin'ny Xubuntu aho, nametraka ambiansy aho ary izay mahita azy dia hiteny hoe Ubuntu io.
Rubén, aza gü… Miteny ianao toa ny nanapa-kevitra ny handao an'i Gnome Fallback i Ubuntu.
Izany fikajiana mavesatra izany ho an'ny sasany dia misy ifandraisany amin'ireo paradigms fitarihan'ny fikandrana miaraka amin'ny menio fanombohana, ny zanabolana ary ny lisitry ny varavarankely, amin'izao fotoana izao dia manolotra soso-kevitra momba ny gnome sy canonical fa misy fomba hafa hampiasana pc iray ny olona dia manohitra ny hiara-miasa hatrany. varavarankely. Ho an'ireo izay mila OS amin'ny milina tsy dia matanjaka loatra, misy lxde, xfce ary ambiny mpitantana varavarankely, ny tanjon'ny gnome dia tsy tokony ho birao tsy azo ovaina mihitsy, izany no karakarain'i kde. Betsaka ny mitsikera ny tsy fisian'ny tolo-kevitra ao amin'ny GNU / linux, misy izy ireo ankehitriny, irin'izy ireo ho toy ny teo aloha ny zava-drehetra.
Eny, saingy ny zavatra iray dia ny fandaniana vola kely ary ny iray hafa mankany amin'ny lxde izay tena fototra sy xfce izay miteraka tsy firaharahiana satria tsy mahasarika na inona na inona izany.
Tsapako ihany koa fa tena tsotra ny XFCE, nanandrana ny MATE aho ary tena tsara, ahoana ny fomba hilazana azy, nalaina avy tamin'ny gnome 2, na dia izao aza no tiako dia akorandriaka, amin'ny sakaiza dia nahatsapa ho toy ny gnome 2 aho, mila mijery fotsiny ianao ho an'ny safidy tianay azy, raha tianao ny gnome 2, dia mitovy ny vady, fa amin'ny anarana hafa.
Toa tena tsara ho ahy ny te-hanavao izy ireo, ary antenaiko fa hanatsara kely kokoa ny Unity afaka kelikely ary afaka miverina amin'ny Ubuntu aho (miaraka amin'ny solosaina hafa, mazava ho azy), fa amin'izao fotoana izao ... Isaky ny misy ny kinova vaovao Mivoaka i Ubuntu ary apetrako ary hizaha toetra azy farafahakeliny roa herinandro saingy miverina amin'ny Xubuntu foana aho satria miasa haingana kokoa noho i Ubuntu. Tsy momba ny fianarana izany. Ankoatr'izay ny solosaiko tsy afaka miaraka amin'i Ubuntu.
Ahitsio izay rehetra nolazainao k1000
Ny fametrahana "mode fallback" dia tsy midika fotsiny hoe tsy hisy intsony ny fivoriana GNOME mahazatra. mety misy ihany koa ireo modely GNOME sasany mety hanjavona, toy ny: metacity, gnome-panel, gnome-applets, notification-daemon, gnome-screensaver, polkit-gnome ary nm-applet »
Izany indrindra no ampiasain'ny Canonical hamelona ny Unity ...
Etsy ankilany, tsara ny manafoanany ireo zavatra rehetra ireo raha toa ka tena natokana hampivelatra ny tontolon'ny birao AZY i Canonical ary hijanona tsy hampiasa fitaovana nindramina avy amin'ny Gnome ...
Nolazaiko foana fa ny Gnome dia tetik'asa RetHat ary mihamaro hatrany izy ireo manara-penitra ny tontolo iainana ka tsy misy mampiasa ny fitaovany na ny maodeliny satria eo an-dàlana ho tonga distro "Gnome OS" marina i Gnome
Eo amin'ny tontolon'ny lozisialy maimaim-poana dia afaka mampivelatra ny azy ny tsirairay ary fantatro fa afaka mahatratra izany ny Canonical ary mamolavola ny azy fa tsy mampiasa na inona na inona avy amin'ny Gnome 🙂
Te-hahita Unity miaraka amin'ireo fitaovany sy maodeliko manokana aho fa tsy hiankina amin'ny Gnome mihitsy.
Betsaka na latsaka izay no tao an-tsaiko, RedHad sy Canonical dia tsy nifankahazo satria orinasa iray no mimenomenona fa ny iray tsy manome ampy amin'ny tontolon'ny Linux, ampahany lehibe amin'ny Gnome no tohanan'ny RedHad satria izy ireo dia tokony tsy tokony. mihomehy fa ny distro tazomin'ny orinasa iray dia lasa malaza be amin'ny fampiasana ny fitaovany (ny gnome), etsy ankilany Canonical dia tia tena, satria tsy tiany hisy olon-kafa mahazo tombony amin'ny Unity, fa raha mandray soa avy amin'ny tetikasa hafa ; Gnome nefa tsy mandeha lavitra intsony. Amin'ny fahatongavan'ny ririnina dia hanomana ny popcorn sy ny Coke aho nefa tsy hihetsika lavitra loatra amin'ny solosainako hahitako ny valin-tenin'i Canonical sy ny Unity amin'ity vaovao ity lol, ary jereo ny fihetsika ATI sy Nvidia amin'ny kalitaon'ny mpanara-maso, lol this Mampatsiahy ahy ny raharaha Samsung-Apple misy vazivazy sy troll izany.
Raha tany am-piandohana (Manomboka Linux amin'ny Ubuntu 10.04) dia fantatro fa hahatratra an'io toe-javatra io i Gnome ... Nifidy ny KDE aho, saingy satria tena vaovao tamin'ny linux aho, dia notarihina tamin'ny alàlan'ny forum miaraka amin'ilay "Gnome vs. KDE "sy Gnome dia nivoaka nandresy tamin'ny ankamaroan'ny tranga, saingy tsy mora ny mifindra monina izao, satria natao ho an'ny GTK ny ankamaroan'ny fangatahako.
Mampihomehy ahoana izany Canonical "tsy maniry azy ireo handray soa amin'ny Unity" toa mampihomehy amiko ... Inona no ifotorananao milaza izany? Ary inona no tombony azo amin'izany?
Midika izany fa ny Unity dia tsy azo ampiasaina afa-tsy amin'ny Ubuntu sy ny disto miorina aminy. Angamba diso izany fa amin'izao fotoana izao dia tsy mahalala distro mahaleo tena aho, raha tsy misy fifandraisana amin'ny ubuntu ary miasa eo ambanin'ny firaisana. ary rehefa miteny aho fa mila fitaovana hafa dia midika izany ny tontolon'ny birao Gnome, ary i "jamin-samuel" dia efa naneho hevitra momba azy io etsy ambony:
»… Mety hanjavona ireo maodely GNOME sasany, toy ny: metacity, panneau gnome, applet gnome, notification-daemon, gnome-screensaver, polkit-gnome ary nm-applet”
Izany indrindra no ampiasain'ny Canonical hamelona ny Firaisankina… «
Raha tsy misy distro (ivelan'ny Ubuntu) mampiasa Unity, dia satria tsy nisy tena liana tamin'io tontolo io. Ary misy toe-javatra maro izay mitaona ny tsy fisian'ny fahalianana.
Ny hevitra hoe tsy te hizara ny firaisana i Canonical dia manaparitaka noho ny tsy fahalalan'ny olona. Ohatra, ity rohy manaraka ity dia manazava ny fomba fametrahana Unity amin'ny Arch Linux:
Ary misy ny olona miasa amin'ny Debian, Fedora, openSUSE, ... mba hanandramana mahazo ny Unity hiasa tsara ivelan'ny Ubuntu.
Misy lehibe iray tavela, na dia mahazo aina ao anaty boaty misokatra aza aho
Raha miray isika dia miverina ao amin'ny Gnome Shell i Debian…. mety tsy ho ratsy tarehy intsony io. Manana ho avy be ny Gnome, saingy mbola eo am-panovana hatrany isika ka tsy hita ny raharaha. Fa misy ny fepetra raisina mba hahatratrarana ny fampidirana estetika sy fiasa miavaka. Ireo rindranasa izay ampidirina miandalana ho ahy dia mahomby ary notapahina tamin'ny lamina fampidirana mitovy (ohatra, ny boky elektronika dia azo vakiana tsy misy rindrambaiko fanampiny ary tantanana amin'ny fomba mitovy amin'ny sisa amin'ireo antontan-taratasy). Ny KDE dia lava kokoa, matotra kokoa ary manolotra safidy bebe kokoa raha miresaka amin'ny fitaovana finday…. izay ny ho avin'ny computing (Tsy milaza aho hoe manjavona ny PC)…. fa Gnome kosa mitady tsotra kokoa noho ny interface iraisam-pirenena. Ary mahomby… na dia mety miadana loatra aza. Avy amin'ny nahitako ny tenako teny amin'ny sampanan-dalana aho satria "tiako ny Gnome 2" ka tiako ny Gnome Shell ary fantatro ny fomba hiandrasana ny fivoarany, marina araka ny hevitro. Ary mieritreritra foana fa afaka misafidy fomba hafa hafa toa an'i KDE …… na dia tsy dia misokatra be aza ny làlana vaovao mitady fahatsapana mitovy amin'ny Gnome 2, izay fandaniam-potoana sy loharanom-pahalalana ary sehatr'asam-pifamoivoizana ho an'ireo mpampiasa vaovao . Tokony hisy ny birao hafa mazava fa tsy ireo derivatives izay mitovy kokoa, saingy ratsy kokoa.
Ny ahy nandritra ny androm-piainany dia ny fivoaran'ny Ubuntu, izay toa tsy miala amin'ilay ampondran'ny Unity. Ubuntu no fizarana izay nahatonga ahy ho mora foana ary sarotra ho ahy ny mahita ny solon'i Debian (tsy misy ireo "tweaks vita amin'ny Canonical" izay manao ohatra, toa tsara ny loharano). Tsy dia naharesy lahatra ahy loatra i Fedora ka manohy miaraka amin'ny Ubuntu Gnome Shell (na gUbuntu) aho miaraka amin'ny fanantenana fa mahafeno ny tanjona i Gnome ary mamoaka ny distro azy manokana (amin'io fotoana io dia tokony hahomby tokoa ny tontolo iainana). ElementaryOS ...... toa "nakatona" loatra amiko, na dia tsapako aza ny asany tsara sy ny fahombiazany tamin'ny fisafidianana ny Gnome Shell "tononina" hanasarahana ny tenany, izay tokony ho nataon'i Canonical.
"Satria fantatr'izy ireo fa mety ho zavatra kely daholo ireo rehetra ireo, dia izy ireo ihany no manoro hevitra ny hampiasa ny sehatr'asa Desktop hafa ho solony, ohatra Xfce na MATE .."
Heveriko fa ny fantatr'izy ireo dia misy olona tsy sahy miova amin'ny vidiny rehetra, ary manana izany safidy izany izy ireo.
Farany, hifarana ilay interface taloha satria io no interface tokana izay miovaova tsikelikely amin'ny fisehoan'ny pc touch vaovao dia ny akorandriaka, hevitra iray izay nanomboka hatrany am-boalohany, saingy nahita mialoha ireo endrika vaovao amin'ny pc ho avy ary izaho Ny marina dia, mino aho fa ny olona manafika ireo fanovana ireo dia nikatona saina ary tsy mahalala ny fomba nahatongavany sy nijanona tao amin'ny tontolon'ny linux sy rindrambaiko malalaka
Heveriko fa efa nampiasanao matetika ity "interface taloha" ity satria toa miteny amin'ny fahalalana ny zava-misy momba ny fandrosoana lehibe nataon'i Gnome 3 momba ny andiany 2 ianao.
Raha ny tsaroako araka ny efa nolazain'izy ireo tetsy ambony dia hatramin'ny 5 taona lasa izay dia tsy nila milina intsony ny milina iray, tsy izany no zava-misy ankehitriny miaraka amin'ireo "tontolo vaovao natokana hikasika PC", mamela olona maro tsy faly izy ireo ary eo amin'ny sisiny.
Tsy mihevitra ny tenako ho "nakatona" aho ary afaka milaza aminao fa teto amin'ity tontolon'ny Linux ity aho nanomboka tamin'ny Mandrake 6.0 (1999), afaka miresaka momba ny birao, distros, kinova tsy misy olana aho, fa mieritreritra zavatra diso aho .. . 😉
Tena tiako ny hevitrao, ny manontany tena anao dia na dia mety ho tsara tarehy kokoa noho ilay teo aloha aza ny Gnome 3 miaraka amin'ny akorany, inona no nanamarika ireo mpamorona gnome-shell nanazava ny tenany ny tontolon'ny interface interface raha mora ny miaiky fa ny ankamaroantsika dia tsy manana touchscreens ary tsy satria manana solosaina finday na birao taloha (izay mety ho) fa noho ny solosaina finday marobe dia tsy amidy ankehitriny ary noho izany ny tombony azo omena endrika toy izany ny mpampiasa azy, ary manakana antsika izay mampiasa fitaovana fampidirana ankehitriny, jereo ny totozy na fitendry.
Fa maninona no nataon'izy ireo izany? Betsaka ny fomba fanavaozana ary nisafidy lalana tsara nefa tsy mandeha izy ireo
Tsy hoe tena tsara tarehy izy io, fa na inona na inona tsara tarehy kokoa noho ny fijerin'ny tompon-tany Gnome 2. Soa ihany fa minitra vitsy monja no hanaovana azy io ho tsara tarehy sy hananana fangaro miaraka amin'ny hakantony sy hazavana. Ny Gnome 3 dia "tsy dia ratsy tarehy" amin'ny maso ary tsy azo ovaina.
Raha tianao dia azonao atao ny manohy ny pentium 2 sy ny gnome 1.0 anao ary raha indray andro dia mankaleo ny gnome 1.0 ianao dia afaka mametraka windows 98 izay mandeha amin'ny milina misy anao koa raha mbola miaina amin'ny ankehitriny sy amin'ny ho avy aho. Na ny microsoft aza dia nahatsapa fa tonga ny fotoana hanadinoana ny interface taloha sy hifanaraka amin'ny fivoaran'ny pc
Tsy manana pentium 2 aho na mandresy 98 fa misaotra ihany, eny, mila milaza aho fa noho ny fanovana natao ho an'ny Gnome 3 sy ny Unity, androany dia mampiasa Openbox aho,
Ary misy zavatra tsy maintsy isaorako ny vanim-potoana "Touch" (vakio ny mikasika) noho izany, mametraka aho Mahatalanjona, inona no tiako holazaina amin'izany?
Tsy mbola tara loatra ny manohy mianatra sy misaotra ny fihemorana amin'ireo tontolo roa ireo, isaky ny manakaiky ny fahombiazana aho nefa tsy mila mandany denaria tokana (Euro) isaky ny mivoaka ny kinova Ubuntu vaovao, araka ny fahitako azy. ianao io Ity no tranga ary an'ny maro hafa izay nanadino fa ny GNU / Linux dia tsy nitovy tamin'ny Windows, fa isaky ny kinova dia saika voatery nanova solosaina noho ny tsy fahampian'ny loharanon-karena, ankoatry ny ady amin'ny viriosy na aiza na aiza, fa raha «hatramin'ny farany ianao»: D.
Raha manaraka an'io dingana io ianao, dia hitovy amin'ny haavon'ny Windows ny Ubuntu, izany no tsy ampiasako azy, na ny iray na ny iray hafa, fa ny lohahevitra Ubuntu dia horesahina ao anaty forum fa tsy eto
@coco, ratsy tokoa ny fitsikerana ny olona mifototra amin'ny stereotype.
@ Windóusico, efa namaky ny Arch Wiki manontolo aho; Ary raha marina izany, ny mitondra ny Unity amin'ny disos hafa dia ny olana, tsy ny kanonika no tsy faly amin'ny famelana distros hafa hampiasa azy. Saingy, ho hitako ny hiafaran'ity fikorontanan'ny Gnome ity mifandraika amin'ny Unity, CrossOver manolotra kinova 1-taona maimaimpoana ho an'ireo izay misoratra anarana, manafatra ho an'ny Linux; ary betsaka kokoa ... Heveriko fa hanana Krismasy mahaliana aho. Famihina xD
Raha ny tokony ho izy, te-hiarahaba ireo mpandrindra an'ity bilaogy ity aho, ary milaza fa ankoatry ny maha-kanto azy, tiako ihany koa izany noho ny fahalalako lohahevitry ny tonian-dahatsoratra. Tiako ny fomba fanehoanao ny tenanao amin'ny lahatsoratrao miaraka amina voajanahary. Zavatra iray, azonao atao ve ny manangana rafim-pifidianana ho fanehoan-kevitra? zavatra toa… »izay voasoratra anarana ihany no afaka mifidy; izay tsy voasoratra ara-dalàna ihany no manan-katao maneho hevitra nefa tsy mahay mifidy »zavatra mitovy na mihoatra ny kely. Misaotra anao
Noooooo !!! Inona no hataontsika raha tsy mihemotra isika?
ireo manana solosaina antitra dia tokony hampiasa gnome 2.3?
Ny Gnome 3 dia tokony handeha lavitra lavitra noho ny isaky ny kinova. Izay ny olana. Raha nanao dingan-dàlana lehibe izy ireo, dia hiandry ny famoahana vaovao tsirairay ireo mpampiasa ary ho lasa tia ny rafitra. Zavatra mitovy amin'ny mitranga amin'ny Android. Ny Gnome Shell dia tsy nandroso saika n'inona n'inona hatramin'ny nanombohany ary hampiakatra azy io dia hahavery ny asany ary mahatonga ny fanitarana azy tsy mifanaraka amin'ny akorany iray ihany! Tokony hanova lalana izy ireo ary ambonin'izany rehetra izany dia ataovy ho matihanina sy ho matihanina kokoa ho an'ny mpampiasa antonony
Vincent dia hoy izy:
Ratsy loatra ny gnome 🙁 izany no mahatonga izao vady izao: 33
Valiny tamin'i Vincent
Miankina amin'ny filan'ny olona tsirairay ny Gnome, raha mety aminao ny maody mahazatra na ny kinova vaovao.
Ny tontonana Gnome dia manana menus telo avy aminy:
Fampiharana, Toerana ary Desktop.
Stallman dia miaro ny fanovana ny rafitra patanty
Araho izahay ao amin'ny kaonty Twitter anay